मधेसी जनता भन्छन्-‘पहाड–मधेस’ होइन, देशको कुरा गर ! नत्र पहाड पनि बाँकी रहन्न' - Asian Samachar
मधेसी जनता भन्छन्-‘पहाड–मधेस’ होइन, देशको कुरा गर ! नत्र पहाड पनि बाँकी रहन्न’
Asian Samachar शनिबार, पुस २३, २०७३ (11 months ago) देश
काठमाडौं- नेकपा एमालेसहित ९ दलले शुक्रबार राजधानीमा संविधान संशोधनविरूद्व शक्ति प्रदर्शन गरे । एमालेको अगुवाइमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ सहितको आमसभाको आयोजना गरियो । ९ दलको साथ पाएको एमालेको दशक यताकै ठूलो जनप्रर्दनसमेत हो ।
गलामा सेतो गम्छा पहिरिएर आमसभामा सहभागी हुन राजधानीमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदाय मात्र होइन गाडी ‘रिजर्भ’ गरेर दुई नम्बर प्रदेशबाटसमेत उल्लेख मधेसी समुदाय उपस्थित भएका थिए ।
आमसभास्थलको मध्यभागमा भेटिए जनकपुरका सरोजकुमार शर्मा । गलामा गम्छा ओढेका उनी धोती लगाएर प्रदर्शनमा सहभागी थिए ।
उनी भन्दै थिए नेताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्दा भारतले खेल्ने मौका पायो । “हामी आफैँ झगडा गरेर बस्यौँ भने अरुले खेल्न थालिहाल्छन् नि !,” उनले थपे ।
मधेसीको सवालमा एमालेले लिएको नीति ठिक भए पनि मधेसीलाई बुझाउन नसकेको धारणा राखे । “एमालेले लिएको विचार सही भएर नै गाडी रिजर्भ गरेर यहाँ आएका हौँ तर नीति ठिक भए पनि नेताहरूले मधेसमा गएर आफ्ना कुरा राख्न सकिराखेका छैनन् । यस्तो आमसभा मधेसमा गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए ।
आमसभामा सहभागी हुन सर्लाहीबाट पनि ठूलै पंक्ति आएको थियो । त्यसमध्ये थिए आनन्द महतो । उनले चाहिँ तराई– पहाड जोडेरै प्रदेश बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै भने “दुई नम्बर प्रदेशमा आठवटा जिल्ला छ । न नदी छ, न वनजंगल नै छ ।’
हामीलाई गिटी वालुवा चाहियो भने लिन कहाँ जाने ? यस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनुपथ्र्यो !” सिन्धुली, उदयपुर लगायतका केही जिल्ला जोडेर प्रदेश बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
धनुषा मिथिलेश्वर निकास गाविसका अध्यक्ष गंगाप्रसाद मुखिया पनि आमसभामा सहभागी हुन आएका थिए । उनले चाहिँ तराईं टुक्रने सपना नदेख्न चेतावनी दिए ।
विधेयकबारे बुझ्नु भएको छ त ? भन्ने जिज्ञासामा भने उनीहरूले केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।